टिकट बुकिङ खुलेसँगै यात्रुको घुइँचो, राती ३ बजेदेखि लाइन ! | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन ७, सोमबार , नेपाली समय : ०१:४२ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
टिकट बुकिङ खुलेसँगै यात्रुको घुइँचो, राती ३ बजेदेखि लाइन !
२०७४ भाद्र २७, मंगलबार ०४:४४ pm | आजको पत्रिका
काठमाडौँ २७ भदौ, रातभरीको वर्षा, बिहानको चिसो मौसम, हजारौँ मानिसको लाम, हातमा पैसा बोक्दै काउण्टरमा धकेलाधकेल– यो काठमाडौँको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको दृश्य हो ।
नेपालीको महान् चाड वडादशैँ नजिकिएसँगै सरकारले आजदेखि लामो तथा मझौला दूरीको टिकट बुकिङ खुला गरेको छ । अग्रिम टिकट बुकिङको खबर केही दिन अगाडिदेखि नै सञ्चारमाध्यममा छाएपछि एकाबिहानै हजारौँ व्यक्ति नयाँ बसपार्कमा लामबद्ध देखिन्थे ।
आगामी असोज १० गते प्यूठानको मच्छी जान ग्वार्कोबाट टिकट लिन बिहान ४ बजे नयाँ बसपार्क आएका विकास केसीले ७ बजे टिकट पाए । उनी खुशी देखिन्थे । “बिहान ४ बजे पानी परिरहेको थियो, म साथीको मोटरसाइकलमा टिकट लिन आएको हुँ, वर्ष दिनपछि आएको दशैँमा त घर जानुपर्यो नि”, केसीले भने ।
यस्तै एक वर्षको शिशु हातमा बोकेर लाममा बसेकी तारा देउवा कैलालीको लम्की जाने बसको टिकट लिने पर्खाइमा थिइन् । बिहान ७ बजे कपनबाट टिकट लिन आएकी उनले समयमा बुकिङ नखोल्दा आफूहरुलाई समस्या परेको बताइन् । “गत वर्षमा त यति धेरै भीड भएको जस्तो लाग्दैन तर यस वर्ष ज्यादा भीड छ”, उनले भनिन् । पूर्व तथा पश्चिम जानका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ बसपार्क, गौशाला, सुन्धारा, कोटेश्वरलगायत स्थानमा अग्रिम बुकिङ खुला गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै यात्रु नयाँ बसपार्कबाट बाहिरिने गर्छन् ।
ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले ४५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको छ । प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्ल लामो दूरीका लागि नयाँ बसपार्कबाट अरु समयमा दैनिक ३०० को हाराहारीमा बस बाहिर जाने गरे पनि दशैँका समयमा एक हजारको हाराहारीमा जाने गरेको बताउँछन् । उनले पूर्व जानेभन्दा पश्चिम जाने धेरै यात्रु टिकटका लागि बसपार्क आएको बताए ।
लामो तथा मझौला दूरीको सवारी साधनको टिकट बुकिङ खुला गरिएसँगै नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थासमेत कडा पारिएको छ । चाडपर्वका समयमा चोरी, डकैती, ठगीलगायत घटना नहुन् भन्ने उद्देश्यले महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कले विशेष सुरक्षा योजना अगाडि ल्याएको छ ।
पचपन्न जनाको दरबन्दी भएको उक्त प्रभागमा बसपार्क क्षेत्रको विशेष सुरक्षाका लागि थप जनशक्ति माग गरिएको प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिहर सुनुवार बताउँछन् ।
यस्तै यात्रुलाई सहज रुपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायीलगायतले ‘यात्रु सहायता कक्ष’समेत सञ्चालन गरेका छन् । महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल यात्रु भाडाका विषयमा नठगिउन् भन्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यकाका १२ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताउँछन् । उनले बढी भाडा लिइएमा तत्काल महाशाखामा खबर गर्न आग्रहसमेत गरे ।
यात्रु सहायता कक्षमा विभागका कर्मचारी ट्राफिक प्रहरी र उपभोक्तावादी एक एक जना रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष २० देखि २१ लाख यात्रु दशैँ मान्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन् । विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार १५ देखि १६ लाख यात्रु सार्वजनिक यातायात र पाँच छ लाख निजी यातायातमा बाहिरिने बताउँछन् ।
“टिकट वितरणमा कुनै समस्या छैन, सहज रुपमा सौहार्दपूर्ण रुपमा वितरण भइरहेको छ”, प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यस वर्ष गत वर्षको जस्तो नयाँ सवारी साधन थपेको छैन । महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बैंकको महँगो ऋण र बाटो नराम्रो भएका कारण नयाँ बस नथपिएको बताउँछन् । उनले सवारी साधन नथपिए पनि यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउन आफूहरु तयार रहेको बताए । रासस